Fidiarizo Narindra, tanora malagasy modely - Malagasy mitady ravinahitra aty Alemana
Home / Featured / malagasy / modely / tanora / Fidiarizo Narindra, tanora malagasy modely
Fidiarizo Narindra, tanora malagasy modely
Prospérin Tsialonina 01 juillet Featured , malagasy , modely , tanora Edit
Nandritry ny fety fankalazana ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara teto Hambourg dia nisy atrik'asa natokana ho an'ny tanora tamin'ny sabotsy lasa teo. Ramatoa Elsa Rajemison sy Ramatoa Rosanne La Princesse Weil no nikarakara ka nampiranty malagasy modely vitsivitsy. Isan'izany i Fidiarizo Narindra. Ito ny famintinana ny momba azy sy ny lalana nodiaviny.
Izy no Fidiarizo Narindra, 27 taona izy izao ary nanomboka ny taona 2016 dia nanaraka ny sampam-piofanana « Duales Studium Kommunikations- und Medieninformatik » ao @ Orinasa Telekom ao Darmstadt sy any @ Hochschule für Telekommunikation ao Leipzig eto Alemana izy. Efa eo ampamaranana ny fianarany izy izao, izay hahazoany ny marim-pahaizana « Bachelor of Engineering, Kommunikations-und Medieninformatik »
Raha tantaraina kely ny lalana nodiavin’i Narindra, dia ny taona 2011 izy no nandao an’ny Madagasikara ka nitodidoha hila ravinahitra aty Alemana. Toy ny ankamaroan’ny tanora Malagasy dia « fille au-pair » no fahazoan-dalana hivoaka an ‘ny Madagasikara nananan’i Narindra. Izany hoe t@ taona 2010-2011 nohon’ny raharaha mafampana teo @ firenena Malagasy no nanapahan’i Narindra hevitra sy nikarakarany ny diany ho aty Alemana rehefa tsy afaka nianatra noho ny fitokonana lava reny teny @ Anjerimanontolon’Antananarivo izy.
Hianatra! Izay no masaka tao an-tsain’i Narindra, ka nahatonaga azy nifanaraka t@ fianakaviana Alemà iray izay efa nandray Malagasy teo aloha ny mba hiahy azy hahafahany mianatra rehefa vita ny asa maha « fille au-pair » azy tamin’ilay fianakaviana nadray azy voaholany.
Iaraha-mahalala fa tsy eken’ny fanjakana Alemana avy hatrany ny marim-pahaizana baccalauréat avy any Madagasikara ka izay no nahatonga azy nanao ny fandaharana « Studienkolleg» tao @ Oniversite tao München, fandaharam-pampianarana natokana hoan’ny vahiny maniry ny hianatra @ Oniversite eto Alemana hahafana mahazo alalana hanohy fianarana Ambony.
« Ny zavatra efa natao t@ kilasy famaranana tany Madagasikara no atao ao @ Studienkolleg ary miampy fiomanana hiatrehana ny fianarana eny @ Oniversite. Ny toro-hevitro dia izao: ianaro tsara ny teny Alemà raha te-hianatra, tsaratsara kokoa raha C1 ny diploma ananana hanaovana fifaninana hidirana @ Studienkolleg satria mafy ilay fifaninana sy ny fianarana avy eo », hoy i Narindra.
Ny fitiavan’i Narindra mamonjy irony « Messe » irony no nahitan’i Narindra io Duales Studium io.
Amin’izao famaramparanan’i Narindra ny fianarany izao, dia efa voaray hiasa ao @ orinasa ianarany sahady izy rehefa vita ny Bachelor-ny, noho ireo fangatahana asa sy fifaninana anatiny maromaro notanterahiny. Manarak’izay koa dia hanaraka fiofanana avy hatrany izy, « Fortbildung », hahazoany traikefa sy marim-pahaizana ambonibony kokoa.
Ny nofinofin’i Narindra dia ny handraharaha @ resaka « Informatik » any Madagasikara.
Toy izao indray ary ny hafatr’i Narindra hoantsika tanora Malagasy e ! : « Raha manana tanjona ianao dia milofosa hatrany hahatrarana ilay tanjona. Ny olana tsy maintsy misy fa aza mora kivy, misy foana ny vaha-olana ; ary ny olana koa dia mandalo fotsiny ihany fa tsy mitoetra. Dia aza adino ny manankina @ Andriamanitra ny zavatra atao rehetra. »
Unknown 2 juillet 2019 à 15:25
Mahafinaritra akia Narindra a ! sady mendrika deraina ianao amin'ny fikirizanao ka nahatratraranao ny tanjona . Mirary ny soa indrindra ho anao. ny Tompo anie homba sy hitahy anao hatrany. Toutou Ji
Unknown 5 juillet 2019 à 09:42
tena mahafinaritra ahy ny finiavana miatrana toa izao ataonao izao, indraindray matsy rehefa vita ny "Au-pair" dia lazain'ny ankizy sasany hoe sarotra ilay miditra any amin'ny anjery manontolo any ivelany nefa ny finiavana sy ny tsy fahafatarana no betsaka.
Raha mba mety dia zarao amin'ny malagasy hafa eto Alemana io tantara io ary raha mba afaka manampy ny sasany izay te hianatra ianao vao maika tsara.
Mankasitraka ary mirary soa indrindra ho tafita amin'ny ambony indrindra
Nandritry ny fety fankalazana ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara teto Hambourg dia nisy atrik'asa ...
Teneno aho rehefa misy lahatsoratra vaovao !
Teny fisaorana - Fetim-pirenena malagasy Hambourg
Rivo Mahefa Ramarolahy, zoky modely ela nihetezana...
Fiarahana mijery 1/4 Final Madagasikara vs Tunisie...
Fiarahana mijery Madagasikara vs RDC aty Hambourg
alefa barea fanampiana Featured fety fisaorana fizarana hambourg malagasy malagay modely tanora